Pizza - omunye Cuisine Italian lasendulo. Ubuqambi chasiselwe Lucullus waseRoma, okuyinto idume emadilini lawo elihle. Kodwa-ke kunobufakazi kulungiselelwa lokhu isidlo nabaseGibithe, abakhileyo eGrisi lasendulo futhi owawuthandwa kakhulu eMesophothamiya. Esikhathini sethu, pizza yathi chithi saka ngemva kwempi yezwe yesibili, lapho baletha ndawonye umphakathi futhi kwasho ukuqala kwembulunga yonke zanamuhla.
Inhlama - kuyisisekelo pizza. Ziningi izindlela ukupheka, kodwa ongakhetha nakakhulu zokugcwalisa yayo. Ungesabi ukuba ulinge! Okuwukuphela kwendlela uzothola bona okungcono inhlama ye-pizza. Ngokwesibonelo, amanzi ungayithola enye ubhiya okuhle noma wengeze ezinye regia (ingxenye yesine ka inani lamanzi), anikeza fluffiness. Ngaphezu kwalokho, kungase wanezela iwayini ezomile (nakuba kungaze kube yinxenye inani lamanzi) noma esincane brandy. Inhlama pizza esingenamvubelo engeza ezinye amakhambi oqoshiwe, ingxube Provencal amakhambi phansi izinongo eyomile.
Kusukela izici ukunambitheka kanye izinga incike indlela ezinhle zethu pizza. Lokhu dish akanayo ifomula esiqinile. Ukugcwalisa kwenziwa ngokubona kwayo, kuncike umcabango. Empeleni, kuba okufanayo isangweji ashisayo. Ngisho e-Italy zonke pizzaiolo silungiselela ke ngendlela yakhe. Nokho, izinga main edingekayo pizza - uqweqwe elincanyana nge flavorful crispy amabhampa futhi ofanele kuye uphole (ukugxusha). Kulesi sihloko, sichaza indlela yokwenza inhlama ye-pizza esingenamvubelo.
Leresiphi silula futhi ngeke kuthathe isikhathi esiningi, kodwa ekugcineni kuvela esihlwabusayo kakhulu! E-Italy, le pizza kubizwa ngokuthi "la Rustica", okusho ukuthi "izwe isitayela". Inhlama, ixubene yogurt, cabaza ibe ungqimba elincanyana epanini ngaphambilini ugcobe wembatha ukugxusha phezulu ukunambitha, kuye ngokuthi imikhiqizo etholakala. Ifanele njengendlela yemifino, futhi inyama. Khona-ke wafaka kuhhavini osuke usushisa kakade (180 ° C) I-20-25 imiz. Nemthombo ingalungiswa kusengaphambili izingxenye gazinga epanini. Ingase futhi ukupheka pizza ngokwayo. Ngakho, ukulungiselela inhlama ye-pizza esingenamvubelo ku-yogurt, sidinga:
- yogurt (400 ml);
- amaqanda (2 izingcezu);
- ufulawa (2.5 inkomishi);
- usawoti kanye soda (ngesigamu isipuni);
- ushukela (1 isipuni);
- uviniga, baking soda ukuze ucime.
Hlanganisa amaqanda ngemfoloko, banezela ushukela nosawoti, bese ngokucophelela ukwethula kefir. soda Slaked ingezwe nalokho, isiyaluyalu, olalayo ufulawa. Uxove inhlama, ake ukuphumula imizuzu engu-15. Uqedile!
Ungazama ukwenza inhlama ye-pizza esingenamvubelo iresiphi elandelayo. Sizodinga amaqanda 2, izinkomishi ezimbili nengxenye ubisi (lokucuketfwe fat 2.5%), ufulawa nengxenye noma izinkomishi ezimbili, isipuni sikasawoti namafutha omnqumo. bona Okokuqala, beat amaqanda, engeza ubisi sekuqala ukufudumala (kodwa hhayi ashisayo!) Futhi amafutha omnqumo. Ngaphezu kwalokho Pour kancane kancane ufulawa, nomkhombe, enikeza lonke emaminithi la-15. Unikezele ngezinsizakalo futhi ubeke uphole.
Elimnandi pizza kubhakwa ne ushizi elicibilikile okubabayo utamatisi sauce futhi ukugcwaliswa yokuqala kungaba abe indlovukazi wangempela etafuleni! Sokuhlolwa kanye ukudala inguqulo yakho yokuqala ye-pizza. Kuvumela inhlanganisela angenamkhawulo izithako ukulungiselela ezihlukahlukene izinhlobo zawo, okubonisa lokusungula Culinary. Lokhu kwenziwa pizza isidlo othandekayo kakhulu futhi ethandwa kakhulu emhlabeni.
Sibhedlela "Moneron" (Lazarevskoye): ikheli, izithombe kanye nokubuyekeza